Doorashada Itoobiya: Abiy Ahmed oo ku guulaystay aqlabiyad wayn | BANAADIRSOM
Home Wararka Maanta Doorashada Itoobiya: Abiy Ahmed oo ku guulaystay aqlabiyad wayn
Hay’adda Xuquuqul Insaanka Itoobiya (EHRC) ee hoostagta dowladda dalkaas ayaa waxa ay sheegtay in xarumaha ay koormeerayeen “aanay ka jirin xadgudubyo xuquuqda aadanaha ka dhan ah oo culus ama baahsanba”.
Sikastaba xaalku ha ahaadee, warbixin hordhac oo ay hay’addaasi EHRC soo saartay ayaa waxa ay ku sheegtay in deegaannada qaar ay ka dhaceen “xarig aan sax ahayn”, handadaad loo gaystay codbixiyayaasha iyo “dhibaatayn” lagula kacay kormeerayaasha iyo weriyayaasha.
Sidoo kale waxa ay hay’addu diiwaangelisay dhowr dil oo la gaystay maalmihii ka horreeyay doorashada kuwaas oo ka dhacay gobolka Oromia.
Bishii May, Midowga Yurub ayaa dowladda Itoobiya waxa uu ku eedeeyay inay ku guuldarraysatay inay xaqiijiso madax bannaanida doorashadeeda.
Doorasha ayaa ah tijaabadii doorasho ee ugu horraysay ee Mr Abiy tan iyo markii uu awoodda la wareegay 2018.
Abiy Axmed markiiba waxa uu baacsaday musuq maasuqa, waxa uu sii daayay maxaabiistii siyaasadda, haween badan ayuu golaha wasiirada u magacaabay halka uu heshiis nabadeed la galay dowladda dariska ah ee Eritrea, kaddib dagaalkii xadka ee socday 1998-2000 kaas oo ay ku dhinteen tobannaan kun oo qof.
Abiy Axmed waxa uu 2019 ku guulaystay abaalmarinta nabadda ee Nobel Peace Prize, hasayeeshee sanad kaddib, waxa uu howlgal milateri ku qaaday gobol ka tirsan dalkiisa – isagoo ciidamo u daadgureeyay gobolka Tigray si uu awoodda uga tuuro jabhadda JPLF taas oo gobolkaasi maamulaysay kaddib markii ay qabsadeen saldhigyo milateri arrintaas oo Mr Abiy uu u arkay inay tahay hab la doonayo in xilka loogaga xayuubiyo.
Colaadda gobolka Tigray ayaa waxaa ku dhintay kumannana qof waxa ayna horseedday baahi baahsan iyo warar tilmaamaya in gobolkaasi ay macaluul ka jirto.
Sabtidii, markii ugu horraysay muddo laba todobaad ah, Barnaamijka Cunnada Adduunka ee Qaramada Midoobay ayaa bilaabay inuu gobolka Tigray geeyo gargaar.
Dhinacyada kala gadisan ee colaadda ayaa waxa uu dhinacba dhinaca kale ku eedeeyay inuu hor istaagay saadka aadka loogu baahnaa.
Qaramada Midoobay ayaa Jimcihii sheegtay in howlgallada bini’aadamnimo ay curyaamiyeen la’aanta adeegyada asaasiga ah oo ay ku jiraan shidaalka, isgaarsiinta iyo korontada.
Previous articleGudoomiyaha Gobalka Mudug ee Puntland oo si jawaab cajiib ah siiyay odiyaasha beesha Murusade
Next articleXaaska madaxweynihii Haiti oo ka sheekeysay dilka Seygeedii